Amavidiyo amafushane ayisithupha e-Apple Watch nemisebenzi yayo eminingana | Izindaba zamagajethi
Singathola amavidiyo amasha ayisithupha esiteshini se-YouTube se-Appleibhekisa kuzinketho ezitholakala ku-Apple Watch. Lezi yizinhlobo zamavidiyo amafushane lapho i-Apple isikhombisa khona eminye imisebenzi ye-smartwatch ngokusobala nangokuqondile.
Sibona enye yezindlela zokuthola i-iPhone kusuka ewashini uqobo, enye ngomsebenzi we I-Walkie-Talkie, enye lapho abasikhombisa khona ukuthi singayisebenzisa kanjani i-Apple Music nokunye kuze kube amavidiyo ayisithupha aqondile nacacileekusebenzeni kwedivayisi enkulu.
Owokuqala kulawa mavidiyo yilawo asikhombisa ukusebenza kwe- ukumiswa kwezinkinga emikhakheni. Kulokhu bakhombisa ama-Infographs amasha, kepha iyanwetshwa kubo bonke ubuso bewashi:
Ividiyo elandelayo isinikeza Umbono womsebenziesikwenzile osukwini. Lokhu kuyinto ethokozisayo kithina esenza ezemidlalo futhi ngukuthi ukugcwalisa izindandatho "kuyalutha":
Kanjani yenza ngokwezifiso lokho esikubonayo ekuqeqeshweniokuqukethwe ividiyo elandelayo. Ukubona izilinganiso ezimbalwa ngesikhathi sokuqeqeshwa, ukubona okukodwa noma ukwenza ngokwezifiso ukuqeqeshwa ngakunye kungenye indlela esingayithola ku-Apple Watch, yebo, kulokhu kwenziwa nge-iPhone:
Kanjani sebenzisa i-Apple Music ewashini lethungenkathi wenza ezemidlalo noma nganoma yisiphi isikhathi okuqukethwe yividiyo elandelayo. Uyabona ukuthi wonke amavidiyo amafushane kepha aqonde ngqo kulwazi asinika lona.
Ividiyo elandelayo ichaza ukuthi isetshenziswa kanjaniumsebenzi I-Walkie-Talkieewashini lethu. Lo msebenzi uthakazelisa impela ezimweni eziningi nokunye okuningi manje njengoba kulula ukwenza kusebenze noma kungasebenzi kuya ngokuthi sikuphi futhi sikuphi:
Futhi ekugcineni ividiyo esikhombisa umsebenzi we thola i-iPhone yethu kusuka ewashini ekhipha umsindo. Lo msebenzi ulusizo impela futhi ngokuqinisekile ngaphezu kweyodwa oseke wawusebenzisa kwesinye isikhathi, i-Apple isibonisa ukuthi isebenza kanjani:
Manje kuze kube igagasi elilandelayo lamavidiyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Amavidiyo amafushane ayisithupha e-Apple Watch nemisebenzi yayo eminingana
Sebenzisa izaphulelo kumikhiqizo yeKoogeek ku-Amazon
I-Analysis Wings U29S, i-drone ye-FPV esongekayo enezibuko ze-VR nekhamera ye-HD